Nezvedu - Shaoxing Jianye Outdoor Zvigadzirwa Co., Ltd.
SHAOXING JIANYE OUTDOOR MAITI CO., LTD
SHAOXING JIANYE OUTDOOR PRODUCTS CO, LTD yakavambwa mu2006 nefekitori iri kuShangyu, Shaoxing, dunhu reZhejiang, padyo neNingbo gungwa chiteshi kweinenge 1 awa, ichinyanya kugadzirwa kwekuvhuvhuta kuumbwa kwepurasitiki yekupeta tafura, kupeta chigaro chepurasitiki, bhendi repurasitiki purasitiki yekupeta chituru, iwo akasarudzika-ation anobva ku4FT 5FT 6FT kusvika 8FT yemakona mana, uye Dia 27IN, 31 IN, 44IN, 5FT, 6FT kutenderera. Mamwe mapatani matsva ari kuvandudzwa.
Uye sezvo ichikwanisa kupeta kuti zvive nyore kufamba uye kuchengetedza nzvimbo yekuisa, zvigadzirwa izvi zvakagadzirirwa kusangana nezvinodiwa chaizvo zvechiitiko indasitiri yekuhaya, mabiko uye nzvimbo dzemusangano, mahotera, makirabhu, makamuri emusangano uye nzvimbo dzekudzidzira, nezvimwe.
Kuburikidza kumativi gumi makore kukura, Hongye ane vakawanda furidza Kuumbwa michina zvakasiyana saizi iro guru ndiye 23000 magiramu. Iyo inogadzira uye inotengesa anopfuura makumi mana emhando dzezvigadzirwa zvepurasitiki mune zvigadzirwa zve Hongye. Isu tinewo mavheti epa china uye tinonakidzwa nemusika wakanaka kutenderera pasirese. Export kumatunhu anopfuura makumi manomwe nenzvimbo dzinosanganisira Asia, Europe, South America, Middle East, Africa, Russia Hongkong Taiwan nezvimwewo Hongye inogadzirisawo kupa akasiyana mavara. kutaurwa. magadzirirwo uye zvidikanwi zvega: Hongye inokudziridza uye kusundira mamwe mapurani matsva gore rega rega kusangana nezvinodiwa nemakasitoma. Zvigadzirwa zvedu zvakapfuura IS09001: 2008 mhando zvitupa system.
Makambani anonamatira kune "mhando, kutendeseka uye chikwereti kutanga sebhizimusi bhizinesi," bhizinesi rinokura, vashandi vanokura "seye tsika bhizinesi, uye vanokudziridza" kuzvipira, kutaurirana kwehunyanzvi, kushanda nesimba mweya'kana bhizinesi inoenderera nekuvandudza uye manejimendi manejimendi, shingairira kutora chikamu mumakwikwi epasi rose pamwe nekubatana, uye edza kuchengetedza mukuru.
Kambani ine hunyanzvi hwemberi, zvigadzirwa zvemhando yepamusoro uye basa rekufunga, rakakunda genera custo-mer kuzivikanwa nekurumbidza. Boka redu anotarisira nomwoyo wose kushanda nemi uye ushamwari pamwe chete nevakawanda kukura.